कस्तो अचम्म ! मल नल्याउने कम्पनीलाई कारबाही नगर्न मन्त्रालयकै निर्णय ! « Ok Janata Newsportal
कस्तो अचम्म ! मल नल्याउने कम्पनीलाई कारबाही नगर्न मन्त्रालयकै निर्णय !
मल खरिद सम्बन्धी मन्त्रालयको नीतिगत निर्देशक समितिमा बाह्य मानिसको उपस्थिति राख्न नपाइने भए पनि मुक्तिनाथ जोगाउने निर्णय मुक्तिनाथकै प्रतिनिधि राखेर गरेको स्रोतको दाबी छ ।
मन्त्रालयमा भएको सहमतिअनुसार तत्काल कारबाही नगर्ने भनिए पनि कृषि सामाग्रीले एकपक्षीय रुपमा आफूहरुलाई कारबाही गरेको मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेडका अध्यक्ष भरतराज ढकालले बताए ।
कृषि मन्त्रालयका सचिव भन्छन् मलाई थाहा छैन